Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Toki Air waxay ku biirtay Sabre: Tokyo oo asal ah
Radixx, oo ah shirkad Sabre ah oo hormuud u ah bixiyaha softiweerka tafaariiqda ee duulimaadka, ayaa maanta ku dhawaaqday in shirkaddu ay heshiis la gashay dhammaystirka alaabada Radixx oo ay la leedahay TOKI AIR, oo ah shirkad qaadeysa qiime jaban oo fadhigeedu yahay magaalada dekedda leh ee Japan, Niigata. TOKI AIR waxay marka hore diiradda saari doontaa istiraatiijiyadeeda suuqa xilliga firaaqada ee duullimaadyada oo ka imanaya Madaarka Niigata ee tagaya meelaha waaweyn ee gudaha Japan gudaheeda.
TOKI AIR waxay u dooratay Radixx inay tahay lamaanaheeda teknolojiyadda sababtuna waa joogitaankeeda Japan dhexdeeda iyo sidoo kale awoodda ay u leedahay inay la kulanto jadwalka hirgelinta shirkadda. Iyada oo qayb ka ah ka -qaybgalka, TOKI AIR waxay ka faa'iideysan doontaa suunka Radixx oo dhan oo ay ku jiraan Radixx ezyCommerce, Radixx Res, Radixx Go, Radixx Go Touch, iyo Radixx Insight. Qaadashada qolkan oo dhammaystiran ayaa u saamaxaya shirkadda diyaaradaha inay bilawdo iibinta xalalka ugu casrisan oo ay kaxayn karto hufnaanta bilowga hawlgalka.
"Waxaan la dhacnay mid kasta oo ka mid ah tusaalooyinkii badeecadaha ee aan aragnay marka loo eego waqtiyada jawaab -celinta iyo hababka otomaatiga ah ee gacan ka geysan doona sameynta howlaheena duulimaadka," ayuu yiri Masaki Hasegawa, Agaasimaha Wakiilka, TOKI HAWADA. “Waxaan u mahadcelineynaa kooxda Sabre iyo Radixx sida ay uga go’an tahay inay la kulmaan waqtiga hirgelintayada. Waxaan aaminsanahay in raadkooda hadda jira ee Japan oo ay weheliyaan baaxad weyn oo badeecooyinkoodu ay noo oggolaadeen inaan dhidibno waddo xiise leh oo aan hore ugu sii wadno Sabre iyo qaybta wax -soo -saarka Radixx oo ah lammaaneheena teknolojiyadda ee la doortay. ”
Si loo soo bandhigo dalabyada e-commerce, TOKI AIR waxay adeegsan doontaa Radixx ezyCommerce matoorka ballan-qaadka intarneedka oo ay ku jirto Xariirka Wakaaladda Socdaalka oo dhammaystiran kaas oo ay adeegsan doonaan wakiilada socdaalka ee maxalliga ah. TOKI AIR waxay ilaalin doontaa heer sare oo koontarool ah summadooda onlaynka ah waxayna bixisaa iyadoo la adeegsanayo Nidaamka Maareynta Macluumaadka ee Radixx ezyCommerce.
TOKI AIR waxay si toos ah ugu socon doontaa nidaamka adeegyada rakaabka Radixx Res oo loogu talagalay in lagu wanaajiyo xeeladaha tafaariiqda iyo beddelidda, iyada oo tafaariiqda lagu dhisay udub dhexaadka, taas oo awood u siineysa maamulka dhexe ee duulimaadka iyo adeegyada qiimaha lagu daray. Waa caqligan dhexe ee u oggolaan doona shirkadda diyaaradaha inay si dhakhso ah u dejiso sicirka iyo dalabyada dheeraadka ah iyo sidoo kale habab otomaatig ah oo awood u siinaya wax -ku -oolnimada. Is-dhexgalka casriga ah, dareen leh wuxuu taageeraa baahidooda jilayaasha laba-byte, kor u qaadidda waayo-aragnimada wakiilka.
Adeegyada bixitaanka ee Radixx Go iyo xallinta mobilada ee Radixx Go Touch ayaa u saamaxaysa TOKI AIR inay horumariso hawlgalkeeda gelitaanka garoonka diyaaradaha oo si sahal ah u ballaariso awoodda inta lagu jiro xilliga ugu sarreeya iyadoo la adeegsanayo wakiilada wareegga. Wadajir, miiska adeegyada bixitaanka iyo xalka guurguura ayaa gacan ka geysan doona abuurista khibrad madaarka oo hufan oo loogu talagalay dadka socotada ah.
TOKI AIR waxay adeegsan doontaa warbixinta Radixx Insight iyo aaladda gorfaynta si ay si firfircoon ugu gaadho go'aammo ganacsi oo deg-deg ah oo macno leh waqtiga-dhabta ah.
"Waxaan ku faraxsannahay inaan sii ballaarinno iskaashigayaga qiimaha leh ee Japan oo aan ku soo dhaweynno TOKI AIR bulshada Sabre iyo Radixx," ayuu yiri Chris Collins, madaxweyne ku xigeenka sare iyo maareeyaha guud ee Radixx. "Waxaan ku faraxsanahay inaan siinno diyaaradahooda tiknolojiyadda hormuudka u ah warshadaha waxaanan si qoto dheer uga go'an nahay inaan fududeyno hirgelin aan kala go 'lahayn oo aan toos ugu soconno diyaaradahooda."
Si wada jir ah, Sabre iyo Radixx oo ah madal socdaal oo adag ayaa siin doona diyaaradda dukaan hal mar ah oo la soo bandhigo iyo maareyn amar iyada oo loo marayo fulinta iyo hawlgallada duulimaadka kadib.
TOKI AIR waxay duulimaad tijaabo ah ka samaysay Madaarka Tokyo Narita Airport ilaa Sado Airport May 24, 2021. TOKI AIR waxay qorshaynaysaa inay iibiso bisha March 2022 waxayna bilaabi doontaa hawlaheeda duulimaadka badhtamaha 2022. Shirkaddu waxay kaloo qorshaynaysaa inay ballaariso ganacsigeeda xamuulka ATR Cargo Diyaarad dabacsan.
Ku saabsan Sabre Corporation
Sabre Corporation waa shirkad hormuud u ah softiweer iyo teknolojiyad awood u leh warshadaha safarka adduunka, oo u adeegta shirkado badan oo socdaal oo ay ku jiraan diyaarado, hoteelo, wakaalado socdaal iyo alaab -qeybiyeyaal kale. Shirkaddu waxay bixisaa tafaariiqda, qaybinta iyo dhammaystirka xallinta kuwaas oo ka caawiya macaamiisheeda inay si hufan ugu shaqeeyaan, u kaxeeyaan dakhliga una bixiyaan khibradaha socdaalka shaqsiyeed. Iyada oo loo marayo suuqgeeda safarka ee ugu horreeya, Sabre wuxuu isku xiraa alaab -qeybiyeyaasha safarka iyo iibsadayaasha adduunka oo dhan. Madal -farsameedka Sabre wuxuu maamulaa in ka badan $ 260B qiimihiisu socdaalka adduunka sannad walba. Xarunta dhexe ee Southlake, Texas, USA, Saber waxay u adeegtaa macaamiisha in ka badan 160 dal oo adduunka ah. Wixii macluumaad dheeraad ah booqo www.sabre.com.
Ku saabsan Radixx
Waxaa la aasaasay 1993, Radixx, oo xaruntiisu tahay Orlando, Florida, waxay isku dartaa hab farsamo oo cusub oo leh moodooyin iskaashi oo gaar ah oo u saamaxaya shirkadaha duulimaadyada dhammaan cabbirrada iyo moodooyinka ganacsi inay noqdaan tafaariiqleyaal wax ku ool ah iyo hawl -wadeenno hufan. Radixx wuxuu u adeegaa shirkadaha LCC iyo ULCC, oo ay ku jirto taageerada qaybinta GDS. Radixx waxay bixisaa Injineer Booqasho Internet oo heer caalami ah, Radixx ezyCommerce ™, Nidaamka Adeegyada Rakaabka ee daruuriga ku saleysan, Radixx Res ™, iyo hormuudka Adeegyada Bixitaanka, Radixx Go ™, oo si gaar ah loogu talagalay inay awood u siiso shirkadaha diyaaradaha inay kordhiyaan faaiidadooda iyo inay sare u qaadaan wax soo saarka ballaariyay adeegyada qaybinta. Tan iyo 2016, Radixx waxay bixisay jiilkeedii lixaad, nidaamka adeegyada rakaabka ee ku saleysan adeegyada-yar. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Radixx, fadlan booqo www.radixx.com.
About TOKI HAWADA
Waxaa la aasaasay 2020, TOKI AIR waa gaadiid-qaade qiimo jaban oo ay si wadajir ah u aasaaseen Rugta Ganacsiga ee Niigata iyo Ururka Niigata ee Fuliyayaasha Shirkadaha. Diyaaradda cusub ayaa la filayaa inay ku shaqayso diyaaradaha ATR si ay u maraan waddooyin soo jiidasho leh sida aagga Kansai, Nagoya, Sendai, iyo Sapporo. TOKI AIR ayaa qorshaynaysa inay hawlaheeda bilowdo 2022. TOKI AIR waxay qorshaynaysaa waddo cusub oo isku xidha SADO-jasiirad iyo Tokyo.